Mbugharị App adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ndozi ahụ (maka iPads kwa)! - Iphone
ekwentị m na -akwụsị ọrụ na -enweghị usoro
ọkpụkpọ wifi agaghị adịgide
kedu ihe kpatara ozi m ji acha akwụkwọ ndụ
kedu ihe na -esote egwu mbata na ọpụpụ
fitbit m agaghị ejikọ na bluetooth
Zoom App Not Working Iphone
’Re na-achọ isonyere nzukọ Zoom, mana ọ na-arụ ọrụ ọfụma. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, oku vidiyo anaghị arụ ọrụ. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa otu esi edozi nsogbu ahụ mgbe ngwa Mbugharị adịghị arụ ọrụ na iPhone ma ọ bụ iPad gị !
Agbanyeghị na edere isiokwu a maka iPhones, usoro ndị a ga-arụ ọrụ maka iPad! Agbakwunyere ihe ọmụma akọwapụtara na iPad ebe ọ dị mkpa iji nyere gị aka idozi nsogbu ahụ ngwa ngwa o kwere mee.
Anyị ga-amalite site na idozi nsogbu abụọ nkịtị ndị mmadụ na-abanye n'ime mgbe ha na-eji Mbugharị - Igwe okwu na ịnweta igwefoto. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-atụle ụfọdụ usoro nchọpụta nsogbu ọzọ ma ọ bụrụ na Mbugharị agaghị arụ ọrụ na iPhone ma ọ bụ iPad.
Idozi Nsogbu Igwe okwu
Have ga-enye Mbugharị ịnweta igwe okwu na iPhone gị iji kwuo okwu n'oge oku vidiyo na-aga. Ma ọ bụghị ya, ọ dịghị onye ga-enwe ike ịnụ ihe ị na-ekwu!
Mepee Ntọala wee pịa Nzuzo -> Igwe okwu . Gbaa mbọ hụ na agbanwuru mgba ọkụ na-esote Mbugharị.
Ọ dịkwa mma ịpụ na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ohere Igwe okwu tupu ịbanye na nzukọ Zoom. Igwe okwu nwere ike na-arụ ọrụ na ngwa dị iche mgbe ị na-anwa ikwu okwu na Mbugharị!
Idozi Nsogbu Igwefoto
Alsokwesịrị ịnye Mbugharị ịnweta igwefoto ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihu ihu gị na ihuenyo n'oge oku nzụkọ. Isi laghachi na Ntọala -> Nzuzo na pịa Igwefoto . Gbaa mbọ hụ na agbanwuru mgba ọkụ na-esote Mbugharị.
Lelee sava mbugharị
Sava mbugharị oge ụfọdụ na-ada, ọkachasị mgbe ọtụtụ nde mmadụ na-eduzi nzukọ a na-ahụ anya n'otu oge. Ọ bụrụ na sava ha dị ala, Mbugharị agaghị arụ ọrụ na iPhone gị.
Lelee Mbugharị ọnọdụ ọnọdụ . Ọ bụrụ na ọ na-ekwu na sistemụ niile na-arụ ọrụ, gaa na nzọụkwụ ọzọ. Ọ bụrụ na ụfọdụ sistemụ dị ala, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kpatara Zoom anaghị arụ ọrụ na iPhone gị.
Ego ole ka icloud na -efu
Mechie ma meghee mbugharị
Ngwa Mbugharị ga-adaba site n’oge ruo n’oge, dị ka ngwa ọ bụla ọzọ. Imechi na imeghe ngwa bụ ụzọ dị mfe iji dozie obere mkpọka ma ọ bụ glitch.
Nke mbụ, ị ga-emepe ngwa ngwa ngwa na iPhone gị. Na iPhone 8 ma ọ bụ tupu, pịa bọtịnụ Home. Na iPhone X ma ọ bụ karịa, swipe gbadaa na ala rue etiti ngosipụta ahụ.
Ọ bụrụ n’inwere iPad nwere bọtịnụ ụlọ, pịa ya ugboro abụọ ka imepe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na iPad gị enweghị bọtịnụ Home, swipe elu na ala ruo etiti nke ihuenyo ahụ. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ejide iPad gị na Portrait ma ọ bụ ọnọdụ Landscape.
Swipe Bugharịa elu wee pụọ n’elu ihuenyo imechi ya. Kpatụ akara ngosi ngwa iji mepee ya.
Lelee Maka Mmelite
Mbido ndị mmepe na-ewepụta mmelite ngwa ngwa iji jikọta atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ ịchụta chinchi ndị dị ugbu a. Ọ dị mma ịwụnye mmelite mbugharị mgbe ọ bụla ha dị.
Iji lelee maka mmelite, mepee Storelọ Ahịa ma pịa akara ngosi Akaụntụ na aka nri aka nri nke ihuenyo. Pịgharịa gaa na ngalaba mmelite ngwa. Ọ bụrụ na mmelite dị maka Mbugharị, pịa Mmelite n'aka nri nke ngwa. You nwere ike pịa Melite niile ọ bụrụ n'ịchọrọ imelite ngwa ndị ọzọ gị!
Malitegharịa ekwentị gị iPhone ma ọ bụ iPad
Mbugharị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi nsogbu sọftụwia iPhone nke emetụtaghị ngwa ahụ n'onwe ya. Ibidogharịa iPhone gị bụ ụzọ dị mfe iji dozie ọtụtụ obere chinchi chin. Mmemme niile na-agba ọsọ na iPhone gị mechiri emechi. Ha ga-enweta mbido ọhụụ mgbe ị gbanyere ya.
Na iPhone 8 ma ọ bụ tupu (na iPads na bọtịnụ Home), pịa ma jide bọtịnụ ike. Swipe akara ngosi ike site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPhone gị.
Na iPhone X ma ọ bụ karịa (na iPads na-enweghị bọtịnụ Home), n'otu oge pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ yana bọtịnụ olu. Swipe akara ngosi ike site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị.
Pịa ma jide bọtịnụ ike ma ọ bụ akụkụ dị na iPhone ma ọ bụ iPad gị iji gbanye ya ọzọ.
Lelee njikọ Internetntanetị gị
An njikọ isntanetị a chọrọ iji Mbugharị na gị iPhone. Nwere ike iji Wi-Fi ma ọ bụ data cellular!
Mgbe Mbugharị adịghị arụ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu na njikọ ịntanetị gị. N'okpuru, anyị ga-egosi gị otu esi elele njikọ ịntanetị nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ijikọ Mbugharị site na iji Wi-Fi, gbalịa data cellular (ma ọ bụ nke ọzọ).
Lelee Njikọ Wi-Fi gị
Mepee Ntọala wee pịa Wi-Fi . Ọ bụrụ na a-acha anụnụ anụnụ checkmark na-egosi na-esote aha gị Wi-Fi network, gị iPhone jikọọ Wi-Fi.
Gbalịa gbanwee Wi-Fi ọsọ ọsọ wee laghachi azụ site na ịpị ihe mgba ọkụ na-esote Wi-Fi . Nke a nwere ike mgbe ụfọdụ idozi obere njikọta glitches.
Lelee ederede anyị ọzọ maka ndị ọzọ Usoro nsogbu Wi-Fi !
Lelee Njikọ data Cellular gị
Mepee Ntọala wee pịa Cellular . Ọ bụrụ na mgba ọkụ na-esote Data Cellular dị na, iPhone gị ejikọrọ na netwọk gị nke ikuku ikuku. Gbalịa ịtụgharị mgba ọkụ ma laghachi azụ ọzọ, nke nwere ike idozi obere nsogbu njikọta.
Lelee ederede ọzọ anyị maka ịmatakwu ihe ị ga-eme mgbe Data Cellular anaghị arụ ọrụ na iPhone gị !
Hichapụ Ma Weghachi Mbugharị
O nwere ike ịbụ na faịlụ Zoom emerụwo, nke nwere ike ime ka ngwa ahụ kwụsị ọrụ. Ihichapụ ma tinyegharịa Mbugharị ga-enye gị ntinye ọhụụ ma nwee ike idozi nsogbu ahụ.
Agaghị ehichapụ akaụntụ Mbugharị gị mgbe ị na-ewepụ ngwa ahụ. Agbanyeghị, ị ga - abanye ọzọ ozugbo emegharịrị ya. Dị njikere ịmara akaụntụ paswọọdụ gị tupu ihichapụ Mbugharị na iPhone gị!
Etu esi ehichapụ ngwa Mbugharị
Pịa ma jide akara ngosi ngwa mbugharị ruo mgbe menu gosiri. Kpatụ Hichapụ App , pịa mgbata Hichapụ mgbe nkwenye nkwenye gosipụtara na ihuenyo.
Esi Reinstall Mbugharị
Mepee Storelọ Ahịa ma pịa taabụ Search na ala aka nri n'akụkụ ihuenyo. Pịnye 'Mbugharị' n'ime igbe ọchụchọ ma pịa chọọ . N'ikpeazụ, kpatụ akara ngosi igwe ojii n'aka nri nke Mbugharị iji rụnye ngwa ahụ.
Dkpọ oku-Na Iji Gị iPhone
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị mma, ịnwere ike ịkpọ iPhone mgbe ọ bụla nzukọ Mbugharị. Ndị ọzọ na nzukọ agaghị enwe ike ịhụ gị, mana ha ga-enwe ike ịnụ gị.
Lelee oku mbugharị gị maka mbugharị maka nọmba ịpị. Mgbe ahụ, na-emeghe Ekwentị pịa taabụ ahụigodo. Kpọọ nọmba ekwentị Mbugharị, wee pịa bọtịnụ ekwentị na-acha akwụkwọ ndụ iji kpọọ.
Kpọtụrụ Nkwado Mbugharị
Ọ bụrụ na ngwa Mbugharị ahụ anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, oge eruola ịkpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa ha. Enwere ike nwee nsogbu na akaụntụ gị nke naanị mmadụ nwere ike idozi na ngalaba ọrụ ndị ahịa ha.
Mbugharị na-enye 24/7 nkwado ndị ahịa, gụnyere ekwentị na nhọrọ nkata. Isi na peeji nkwado na Mbugharị nke weebụsaịtị ịmalite!
I nwekwara ike gbalịa iji Mbugharị na Mac gị ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu na iPhone ma ọ bụ iPad. Lelee ederede ọzọ anyị iji mụta otú melite Mbugharị na gị Mac !
’Ve edozila nsogbu ahụ ma Mbugharị na-arụ ọrụ ọzọ. Dị njikere ịkọrọ ndị ọrụ ibe gị ihe ederede a mgbe ngwa Mbugharị na-arụ ọrụ na iPhone ma ọ bụ iPad ha! Gakwuru anyị na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.